​संचार र संगीतलाई एकसाथ अगाडी बढाईरहेका तुलसिंहको यस्तो छ जिवन कहानी
Tuesday, 21 Nov, 2017 11:54 AM
तुलसिंह रनपछाइ म्युजिक चर्चित लोकसंचारकर्मी तथा लोकदोहोरी गायक हुन् । गीतसंगीत र संचार क्षेत्रलाई एकसाथ अगाडी बढाइरहेका गायक तुलसिंह बच्चा देखि बुढासम्म सबै उमेरका व्यक्तिका लागी लोकप्रिय छन् । उनले संचालन गर्ने कार्यक्रम अनी उनका गीतहरु खुबै रुचाइन्छन् । हालसम्म दुई दर्जनभन्दा बढी गीतमा आवाज दिएका गायक तुलसिंहका ‘मायाको सुरुवात’, ‘कति महान् छौ’, तिमी मेरी हैनौ सानु’, सम्झनामा पागल हुने भए’ ‘विर्सियौकी जस्तो लाउन थाल्यो’, ढङ्ग भएको रङ्ग हुन्छ’, आउहै बाबु घरमै फर्केर’ लगायतका गीतहरु उनका लोकप्रिय एमब् चर्चित गीतहरु हुन्, जसले उनलाई चर्चाको शिखरमा पुर्यायो । उनी गुल्मीको ‘सामुदायिक रेडियो स्काई’का प्राविधिक प्रमुख समेत हुन् । तिनै लोकप्रिय एबम् चर्चित संचारकर्मी तथा लोकदाहोरी गायक तुलसिंह रनपछाई म्युजिकले न्यूजसेवासँग आफ्ना जिन्दगीका केहि अनुभवहरु साटेका छन् ।
मेरो बाल्यकाल गुल्मीको अग्लुङमा वित्यो । कक्षा १० सम्मको अध्ययन गाउँमै गरेँ । बाल्यकाल मेरो सामान्य नै रह्यो । गाउँमा मेलापात गर्दा, विभिन्न मेला पर्वहरुमा तथा विद्यालयका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा गीत गाउने गर्थेँ । सानैदेखि एउटा संचारकर्मी बन्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्थ्यो ।
संचार क्षेत्रमा प्रवेश
अरु जागीर खाने भन्दा पनि संचार क्षेत्रमै प्रवेश गरेर केहि गरँ जस्तो लाग्थ्यो । सबैले चिनुन् जस्तो लाग्थ्यो । यहि रहरले २०६४ सालमा प्युठानको ‘रेडियो प्युठान’मार्फत संचारको क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ । त्यतिबेला संचार क्षेत्र र संचारकर्मीको धेरै महत्व थियो । त्यसपछि २०६७ सालदेखि गुल्मीको सामुदायिक रेडियो स्काईमा प्रवेश गरेँ । हालसम्म यसै रेडियोमा कार्यरत छु । मेरो करिब १० बर्षको संचार क्षेत्रको अनुभव सन्तोष जनक नै रहेको छ ।
म संचार क्षेत्रमा प्रवेश गरेसँगै २०६७ सालमा पहिलो गीत रेकर्ड गरेँ । ‘होइन ए होइन सानु’को साइड बी मा ‘मायाको सुरुवात कसले चलायो’ बोलको गीतबाट संगीत क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ । जसमा महिला आवाज चर्चित गायिका मुना थापाले दिनुभएको थियो ।
पहिलो गीतको अनुभव
त्यतिबेला साइड ‘ए’ मा पुराना तथा चलेका कलाकारले गीत गाउनुपर्ने बाध्यता थियो । नयाँ कलाकारको वास्ता हुँदैनथ्यो । त्यो समयमा गीत चलोस् वा नचलोस्, एउटा गीत त गाएरै छाड्छु भनेर लागेँ । गीत पनि गाएँ र सफल पनि भएँ । गीत पनि चल्यो । त्यसैको सफलता र प्रेरणाले गर्दा अहिलेसम्म २ दर्जनभन्दा बढी गीत गाउने अवसर पाएँ ।
मेरो पहिलो गीत ‘मायाको सुरुवात कस्ले चलायो’ चलेको थियो । त्यो गीतले पनि मलाई चिनायो । यससँगै ‘कति महान् छौ’, तिमी मेरी हैनौ सानु’, ‘विर्सियौकी जस्तो लाउन थाल्यो’ लगायतका गीतले मलाई स्रोता दर्शकमाझ चिनायो ।
दुख सुख पर्दा गाइने, लोकका मर्म र भावना बुझेको, हाम्रै गाउँपाखा अनी मायाप्रेमका कुरा गर्ने गीतसंगीतनै लोकसंगीत हो जस्तो मलाई लाग्छ ।
फोहोरी बन्दै गएको दोहोरी
पछिल्लो समय दोहोरी गीतहरु फोहोरी बन्दै गएको अवस्था छ । कलाकारहरु सस्तो लोकप्रियताको लागी छाडा गीत बजारमा ल्याउने प्रचलन पनि रहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली लोकसंगीतको जगेर्नाको लागी विभिन्न संस्थाहरु खोलीएका छन् । त्यस्ता संस्थाहरुले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी सर्जकहरुले पनि सस्तो लोकप्रियतालाई छाडेर मौलिकतालाई प्राथमिकता दिने हो भने त्यस्ता विकृतीहरु आउँदैनन् ।
संगीत र संचार रोज्नुपर्दा
संगीत र संचारमा एकलाई रोज्नुपर्यो भने मैले संगीतलाई नै रोज्छु । संचारको क्षेत्रमा सधै काम गर्न नसकौँला । जबसम्म मेरो गलाले साथ दिनेछ, मलाई रुचाइदिनुहुनेछ, त्यतिबेलासम्म मैले लोकसंगीतलाई निरन्तरता दिनेछु ।
स्रोता दर्शकलाई सन्देश
संचार तथा गीतसंगीतको क्षेत्रमा मलाई रुचाइरहनुभएको छ । यसैगरी माया गरीरहनुहोला । यदि तपाईले माया गर्नुभयो भने म अनी गीतसंगीत रहिरहने छ । सबै गीतहरुलाई माया गर्नुहोला । गीतसंगीतको क्षेत्रमा कुनै विकृती आउन खोजे मलाई सुझाव दिनुहोला ।
कोलम्बो प्रोसेसमा मन्त्रीस्तरीय परामर्श बैठक सुरु आज
वैदिक सनातन धर्ममा किन गरिन्छ ‘यज्ञ’ ? किन मानियो अग्नीलाई देवता ?
मन्त्रिपरिषद् बैठकः निर्णय झन् गुपचुप राख्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
यसरी विघटनको संघारमा पुग्दै नेविसंघ
धर्म परिबर्तन गराउने दुई जापानी महिलालाई देश निकाला
​कोलम्बो प्रोसेस उच्च अधिकारीस्तरीय बैठक शुरु
२९ कात्तिक, काठमाडौँ । श्रम, आप्रवासन र सुशासनको महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संयन्त्रका रुपमा रहेको ‘कोलम्बो प्रोसेस’को उच्च अधिकारीस्तरीय बैठक आजदेखि काठमाडौँमा शुरु भएको छ । प्रोसेस सदस्य मुलुकका उच्च अधिकारी सहभागी बैठकले सुरक्षित आप्रवासनका अवसर तथा चुनौतीको बारेमा गहन छलफल गरी कोलम्बो प्रोसेसको भविश्यलाई ठोस आकार दिन प्रस्ताव गर्नेछ । बैठकको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री
​संसद भवनभित्रै सांसदहरुबीच गोदागोद
२९ कार्तिक, काठमाडौं । श्रीलंकामा संसद भवनभित्रै सांसदहरुबीच हात हालाहाल भएको छ। बिहीबार दिउँसो बसेको संसद बैठकमा विरोधी दलका सांसदहरुबीच कुटाकुट भएको हो। राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका महिन्दा राजपक्षले आफूलाई ध्वनीमतबाट हटाउने अधिकार सभामुखसँग नभएको बताएलगत्तै सांसदहरुबीच हात हालाहाल र धक्कामुक्की भएको हो।
​पर्खाल नाघेर अमेरिका : १९ वर्षीया गर्भवतीले पनि नाघिन् यति अग्लो पर्खाल !
२९ कार्तिक, काठमाडौं । संयुक्तराज्य अमेरिका प्रवेश गर्ने उद्देश्यले सयौं मध्य–अमेरिकीहरु अमेरिकाको दक्षिणी सीमामा बुधबार आइपुगेका छन् । अमेरिकी रक्षामन्त्री जिम म्याटिस स्थलगत अवलोकन भ्रमणमा रहे पनि अरु आप्रवासीको ठूलो समूह पनि अमेरिकी सीमातर्फ अघि बढिरहेको छ ।